Famindram-po ho an’izay tia ny lalàn’Andriamanitra
"Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko" - Eks. 20:6.
Hita ao amin'ny lalàna ireo foto-kevitra folo maneho ny fitiavana lehibe indrindra azo aseho amin'ny olona. Feon'Andriamanitra avy any an-danitra izany lalàna izany, feo izay manambara teny fikasana amin'ny fanahin'ny olona. "Ataovy izany, dia tsy ho tratry ny fanapahana sy ny fangejan'i Satana ianareo". Tsy fandrarana izany lalàna izany, na dia mety ho toy izany aza no fijery azy. Ny ambaran'ny lalàna dia hoe ATAOVY, dia ho VELONA ianao (...) Nomen'ny Tompo ny lalàny masina mba ho manda fiarovana manodidina ny voary nohariany. — SDABC 1:1105
Ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra dia nataony mba hanehoany ny fitiavany lehibe sy ny famindrampony aminao. "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very zay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay." Koa mitsahara ao amin'ny fahazoana antoka ny fitiavan'Andriamanitra (...) Tsy hoe satria efa tia an'Andriamanitra isika no nitiavany antsika, fa "fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika i Kristy".
Ary feno sy ampy ny fahafahana omeny hahazoantsika ny famonjena. Tsy nanary antsika Andriamanitra, na dia mendrika ny fahaverezana sy ny fanamelohana aza isika noho ny tsy fankatoavantsika. Tsy namely antsika hiady irery amin'ny herin'ny fahavalo amin'ny herintsika voafetra Izy. Miady ho antsika ireo anjelin'ny lanitra, ary afaka handresy ny herin'ny ratsy isika raha miara-miasa amin'izy ireo (...) Rehefa manatona Azy amim-pinoana isika, dia manatona antsika Izy, ary ao amin'ny fianakaviany isika, sady ekeny ho zananilahy sy zananivavy. — L, 98b, 1896.
Mampanantena famindrampo Izy ho an'izay mahatoky amin'ny fanompoana Azy. Tsy hatramin'ny taranaka fahatelo na fahefatra ihany anefa (...), fa hatramin'ny taranaka arivo mandimby. — PP, 306
Tsy misy fetra ny famindrampon'Andriamanitra, ary izay mandray ny fitiavan'i Kristy dia hihavao amin'ny tena fahamasinana ary ho tafatakambana amin'i Kristy, ilay Lohan'ny fiangonana. Hanara-dia an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala izy ireo.YI, 06 Janoary 1898.